Sweatpants na -ewe iwe na -akpata nnukwu mkpali site na Spain gaa China na gafee
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ejiji » Sweatpants na -ewe iwe na -akpata nnukwu mkpali site na Spain gaa China na gafee
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi China • omenala • Akụkọ Ejiji • News • Akụkọ na -agbasa na Spain • Akụkọ UK na -agbasa • Akwụkwọ akụkọ USA
Swapta akwa iwe - site n'ikike nke balenciaga.com
Otu ụzọ ọsụsọ na -acha ntụ ntụ na -akpata nkụda mmụọ n'ihi na ọtụtụ na -ekwu na atụmatụ ya bụ ajọ mbunobi na ịkpa ókè agbụrụ. Echefula na otu ụzọ na -efu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 1200. O doro anya na nke ahụ abụghị nnukwu ihe iwe.
Mana ọ bụrụ na ị bụ onye isi ojii America, ịre ahịa ụdị akwa a nwere ike were dị ka ihe arụ.
Kedu maka ụdị ọsụsọ a na -etegharị ọtụtụ mmadụ n'ụzọ na -ezighi ezi?
Akụkọ ihe mere eme ọ kọwara nkọwa nke ụfọdụ na -emegide onye na -eyi akwa maka mkpebi ya ịre ahịa ogologo ọkpa a, na -akọwa ọgba aghara ọha?
Kedu ihe na -eme ka sweatpants bụrụ ihe mkpasu iwe? Ka anyị laghachi azụ n'akụkọ ihe mere eme ntakịrị ịkọwa nke a.
Nhazi ahụ na -ewere ọnọdụ nke inwe uwe mkpụmkpụ nke onye na -apụ apụ n'úkwù wee mee ka ọ bụrụ otu uwe, nke pụtara na etinyere ya.
Nkwupụta ejiji a bidoro laa azụ na 1990s, ọkachasị na hip hop duo Kriss Kross onye yi uwe ogologo ọkpa - azụ - n'okpuru ndị ọkpọ ha na -arụghị n'ime ya, mana ọ dabara. Ọ bụghị akụkụ uwe ogologo ọkpa azụ mana uwe ogologo ọkpa na ndị na -eti ọkpọ na -egosi akụkụ.
N'oge na -adịghị anya, ọ ghọrọ akara ejiji maka ndị isi ojii America. N'ime afọ 2000, ụfọdụ steeti US tiri iwu machibidoro iyi uwe n'ụzọ dị otu a, mana ndị nkatọ kwuru na nke a na -akpa oke megide ndị isi ojii.
A kagbuola ụfọdụ n'ime iwu ndị ahụ ka American Civil Liberties Union chọpụtara na dịka ọmụmaatụ na Shreveport, Louisiana, ndị mmanye iwu na -eji iwu uwe ogologo ọkpa a dị ka ihe ngọpụ iji lebara ndị isi ojii anya wee chọọ ma nwee ike tụọ ha mkpọrọ.
Ịga na akụkụ nke agbụrụ
Yabụ mgbe onye nrụpụta ejiji dị elu Balenciaga tinyere otu n'ime ndị ọkpọ a wuru n'ime uwe ogologo ọkpa nke ahịrị Trompe L'Oeil, ọ bụghị nke ukwuu $ 1,190 akwụkwọ mmado nke ndị mmadụ were iwe, n'agbanyeghị na ụfọdụ na twitter boro ebubo akara nke ụkpụrụ abụọ ma jụọ mkpado ọnụ ahịa dị elu nke traụza ahụ.
Ihe otu onye ọrụ TikTok kwuru bụ na uwe ogologo ọkpa ahụ “na -enwe mmetụta nke ịkpa ókè agbụrụ” n'ihi na ọ na -apụ ọdịbendị ojii. TikTok nke a, n'agbanyeghị, elelela ya anya ihe karịrị nde 1.6. Mgbe onye ọrụ TikTok Mr200m hụrụ ọsụsọ Balenciaga na -ere na London wee bipute vidiyo, enwere ike ịnụ onye na -asị: “Nke a na -enwe mmetụta nke oke ịkpa oke agbụrụ ... ”
E nwere ndị ọzọ n'agbanyeghị na kwuru na ha ahụghị sweatpants ahụ ka ọ bụrụ ịkpa oke agbụrụ. Otu nkọwa kwuru na ịkwa akwa ọkpọ n'ime uwe ogologo ọkpa bụ ihe a na -ahụkarị na 90s.
Site n'ikike nke balenciaga.com
Balenciaga na -aza
Balenciaga kwuru na ọ na-ejikọkarị iberibe wodrobu n'otu uwe ma rụtụ aka na ihe atụ gụnyere "akwa jeans na-eyi n'elu uwe ogologo ọkpa [na] uwe elu na-etinye n'elu t-shirts," onye isi ahịa ahịa, Ludivine Pont kọwara. "Tzọ Trompe L'Oeil ndị a bụ mgbatị nke ọhụụ ahụ."
Mgbe ole Na -enyocha weebụsaịtị Balenciaga, ọ nwere ihe ndị ọzọ ejikọtara ọnụ na akwa mkpuchi dịka Knitted Sweatpants nwere akwa sweatshirt wuru na-n'úkwù… maka $ 1,250. Ndị na -eyi sweatpants nwere ike mejọọ, n'ụzọ, yiri ka ha apụla na webụsaịtị n'otu abalị.
Akụkọ Ndị Ọzọ Ị Ga -atụle
Ezi mmalite nke nkwupụta ejiji nke uwe ogologo ọkpa nwere n'ezie akụkọ ihe mere eme. Ọ malitere mgbe ndị isi ojii mere ohu na America ma nwetakwa ya site na omenala akpọrọ '' buck busting '' ma ọ bụ '' buck breaking ''. Ọ bụ ezie na okwu ndị a na -ekwu maka ịkpa ịnyịnya ọhịa n'ike, ndị nwe ebe ndịda na -ejikwa ahịrịokwu ndị a na -ezo aka na omume '' ịdaba '' ndị ohu ojii bụ ndị isi ojii.
A ga -akpọga ụmụ nwoke ojii a n'ihu ọha ebe a na -eme ndị ohu niile ka ha na -ele anya ka e nyere ya iwu ka ọ gbadata uwe ogologo ọkpa ya wee gaa n'ihu. “Nna ukwu” ahụ ga -edina nwoke ahụ n'ike n'ike wee were eriri ya mee ka uwe ogologo ọkpa ya daa. Nke a mere ka ọ bụrụ ihe nnọchianya nke 'agbaji' ma ọ bụ 'agbaji' iji gbochie ndị ohu ndị ọzọ ime omume nnupụisi.
Ọ bụghị oge mbụ
Nke a abụghị nke mbụ onye na -emepụta ejiji na -agafe ahịrị omume. Afọ ole na ole gara aga, ụlọ nrụpụta ejiji okomoko nke Spanish Loewe webatara otu uwe elu na uwe ogologo ọkpa ojii na ọcha (ya na uwe elu naanị na -ere ahịa maka $ 950) dị ka akụkụ nke nchịkọta capsule pụrụ iche. A kọwara ya dị ka onye sitere n'ike mmụọ nsọ onye England bụ William De Morgan nke narị afọ nke 19.
Ekike ahụ, butere arụmụka ozugbo mgbe ndị mmadụ kwuru na ọ dị mma nke ukwuu yiri uwe ndị mkpọrọ n'ogige ịta ahụhụ ndị Nazi n'oge Agha Ụwa nke Abụọ.
John ekwu, sị:
September 16, 2021 na 18: 41
Kedu onye ga-azụta uwe ogologo ọkpa $ 1200, na-abụghị obodo nwere ọnụ ụzọ, onye na-elekọta mmadụ champeenu, onye na-efe ahịhịa ahịhịa, ebe ọ na-enweghị ego ọ bụla iji nọrọ ebe dị anya site na ha?